PressReader - Ilanga: 2017-09-14 - UKHISIMUSI OMUHLE KWABAZONQOBA I-SANLAM MARATHON
UKHISIMUSI OMUHLE KWABAZONQOBA I-SANLAM MARATHON
Ilanga - 2017-09-14 - Ezemidlalo - MZWAMANDLA ZONDI
ZIZOKUBA noKhisimusi omuhle izingqwele zeCape Town Sanlam Marathon ezokuba ngeSonto eGreen Point Stadium, eCape Town.
Lo mjaho ungomunye wemikhulukazi e-Afrika njengoba ungaphansi kwe-International Association of Athletics Federation (IAAF). Abasubathi abenze kahle kuwona bazothola ithuba lokumela amazwe abo kumaCommonwealth Game azokuba ngonyaka ozayo eGold Coast, e-Australia.
Izingqwele kulo mjaho zizohlomula ngo-R265 000 kubo bobubili ubulili kwehle njalo kuze kuyofika ku-R10 000 kwabazongena endaweni yeshumi. Umsubathi wokuqala waseNingizimu Afrika ukushaya intambo uzohlomula u-R100 000 bese kuthi owaseWestern Cape azitholele u-R10 000. Abasubathi abazokwenza izikhathi ezingaphansi kuka-2:12 kwabesilisa no-2:32 kwabesifazane bangase bathole ithuba lokume- nywa emijahweni emikhulu emhlabeni.
Kulo mjaho kulindeleke ukuba abasubathi bakuleli bathwale kanzima kwabaseKenya nakwabase-Ethiopia abenza kahle kuma-marathon emhlabeni. Abadidiyeli balo mjaho bakuqinisekisile ukuthi zizokube zikhona izingqwele zanyakenye zawo.
Irekhodi lalo mjaho liphethwe ngu-Asefa Negewo wase-Ethiopia ngo-2:08:41 no-Isabella Ochichi waseKenya (2:30:20). Abasubathi bakuleli ababhekiwe nguDesmond Mokgobu oqeqeshwa nguHendrick Ramaala osematheni kulezi zinsuku ngemuva kokuba umsubathi wakhe, uLungile Gongqa, edle ubhedu kwiTwo Oceans Marathon yanonyaka kube uGladwin Mzazi, u-Elroy Gelant ozokube eqala ukugijima i-marathon. Kwabesifazane kubhekwe u-Irvette van Zyl osephumele obala kaningi phambilini ngokuthi uzimisele ngokudla ubhedu kulo mjaho.